Uhlaziyo lukaNewton kunye ne-winks kwi-Stranger Things | IPhone iindaba
Uhlaziyo lukaNewton kunye ne-winks kwi-Stranger Things kwidemo
INewton sisicelo se-imeyile sokuba i-Cloud Magic yaba, ihlawulwa. Ngayo yonke le nto, kuye kwafumana uthotho lotshintsho kunye nokulungiswa okucacisa ixabiso, kwaye namhlanje uhlaziyo olukhulu lufikile. Oku kuyakunikezelwa kungekuphela ekusombululeni iimpazamo zexa elidlulileyo, kodwa ukongeza izinto ezintsha ezinje ngamanyathelo amabini, isiqinisekiso sokhuseleko esinokubonakala siyimfuneko kwabaninzi, kwaye sithetha ngomphathi we-imeyile, eyona nxalenye ibalulekileyo yomsebenzi abantu abaninzi kwaye apho kunokubakho ulwazi olufanelekileyo kakhulu. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba yintoni entsha kwiNewton Mail ye-iOS.
Ngokuphathelele iindaba, ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini kugqityiwe, ukukhusela iakhawunti yethu ngenkqubo yeekhowudi ngeSMS okanye ngomnxeba. Kwelinye icala, Inkqubo yokuqinisekisa ukufundwa kunye nokulandelelwa kweposi ngoku iba ngumntu ngamnye nge-imeyile nganye ethunyelweyo. Ngale ndlela, eNewton ye-iOS sinokumakisha ii-imeyile ezizokwaziswa xa zifundwa.
Asipheleli apha, kwaye sinokuwenza lo msebenzi kuseto lwe-imeyile kaNewton, hayi abo bathunyelwe kuphela, kodwa nabo bafumeneyo. Ekugqibeleni, wamkela iGrisi, njengoko zibandakanya inkxaso ethile yeli lizwe.
Kwisakhelo sokulungiswa kwe-bug, sithi ndlela-ntle xa kulayishwa iingxaki xa saside kakhulu ngaphandle kokuyifumana (i-inbox yayigeza), phucula ukusebenza kweHandoff, Asazi ukusukela oko kwafika i-iOS 10, kwaye iimpazamo zakudala kwizaziso zibonakala zisonjululwe, nangona kuyingxaki ukuba uNewton eberhuqa ixesha elide, ephawula ngokungafundwanga kwezinye ii-imeyile ezazikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Uhlaziyo lukaNewton kunye ne-winks kwi-Stranger Things kwidemo
IXESHA libeka iApple Airpods njengeyona nto ibalaseleyo yonyaka
Umgcini weembaleki sele esivumela ukuba siqeqeshe sisebenzisa iApple Watch kuphela